अव कारा'गार परिसरमै यौ'न स'म्पर्क राख्न पाइने - Muldhar Post
अव कारा’गार परिसरमै यौ’न स’म्पर्क राख्न पाइने
पत्रपत्रिका खबर २०७६, २२ कार्तिक शुक्रबार 1244 पटक हेरिएको
काठमाडाैं । अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् । त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।
तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३७ मा भनिएको छ ।
५ वर्षमुनिका सन्तानलाई महिला बन्दीले आफैंसँग राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको रेखदेख र जीवनयापनमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ । विधेयकमा कैदी–बन्दीका दम्पतीबीच कारागार परिसरमै ‘यौन सम्पर्क’ को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ दफा २३ मा भनिएको छ ।
विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नियमावली र निर्देशिका बनाएर प्रजनन अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि समेटिने गृहले जनाएको छ । प्रजनन अधिकार भने जुनसुकै कसुरमा थुनिएकालाई पनि दिइनेछ । विधेयकमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर भागेर पुनः पक्राउ गरिएकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ । सांसद रेशमलाल चौधरीलाई दुवै गोडामा नेल लगाइएकै अवस्थामा वीर अस्पतालको शय्यामा राखिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापेको छ ।
कक्षा १ र ११
कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्ति
जोल्जी लैजाने घोडा उपयोग
यौ’न जीव’नमा मधुमेहले कत्तिको
कालापानी आवरण-नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू
नेपालीभूमी मिचेर कतै खेती
घरकी सोझी स्कुलकी ब’दमास
घरकी सोझी स्कुलमा बदमास
आमाको दुबै मृगाैला फेल
काला’पानी भार’तकै भएको मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंहको दा’बी
महरा एकाबिहानै कैदी बन्दीलाई भन्छन् उठौं साथी उज्यालो भइसक्यो !
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले भने हाम्रो मन मुटुमा छ बुद्ध जन्मभूमि नेपाल
कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठयक्रम लागू, हटाइयो पूर्णाङ्क
प्रशासकिय अधिकृत बि’रुद्ध गाउँपालिका अध्यक्षको उ’जुरी
कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्ति बारे के-के लेखे भारतीय मिडियाले ?
लिपुलेकसम्म पुग्न धमाधम सडक बनाउँदै भारत
आज मंसिर ३ गते राशिअनुसारको प्रत्यकको भाग्यफल
आफ्नै गु’प्ताङ्गको तस्बिर खिचेर सार्व’जनिक यी कलाकारले